နှောင်ကြိုးတပ် ရင်ခတ်နာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်း လှပချင်ကြတာဘဲ
ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ တွေးဆချိန်မရခဲ့ … ပြင်ဆင်ချိန်မရှိခဲ့
ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ် ကပြာကယာရေးလိုက်ရတဲ့ သမိုင်းတပုဒ်ပါ ..။နေ့စဉ် စား ၀တ် နေ အရေးတွေအတွက် ၀င်ငွေရှိဘို့ “အလုပ်” ဆိုတာ
ပညာမမှီ ဉာဏ်မပီသူတယောက်အတွက်တော့ ပိုပြီးခက်ခဲရှားပါးတော့တာပေါ့ …။
အမိမြေကိုစွန့်ခွာပြီး အခွင့်အလမ်းသာတဲ့ တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ
သူများတွေနည်းတူ ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် …။
….. လူသားတွေ လူ့သဘာဝအတိုင်း ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ
လက်ရှိအခြေအနေထက် သယာကောင်းမွန်မယ့်နေရာကို မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ် …
လူသားတွေအပေါ် အခြေခံပြီး အထူးအင်အားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ
လူတယောက်ရဲ့ မပြည့်စုံခြင်း ချို့တဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို
အခကြေးငွေယူပြီး ပို့ဆောင်အလုပ်ရှာပေးတယ် …
ခရီးစရိတ်စိုက်ထုတ်ပေးမယ် .. အလုပ်ရတဲ့အခါမှ ပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ …..
အမှန်တကယ် “အလုပ်” လိုအပ်နေခဲ့ပြီ
ရမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်ကောင်းကောင်းကြောင့် မျက်စိစုံမှိတ် ယုံပစ်လိုက်တယ် ….။
တကယ်တန်းကျတော့ လိမ်ညာလှည့်ဖျားပြီး လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀တခုလုံးကို
လူမှောင်ခို လူကုန်ကူးသူတွေရဲ့လက်ထဲကို ရောင်းစားပစ်လိုက်တာ …
Sex Worker တဲ့ …. ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်
ငြင်းပယ်ခွင့် မရှိ ..
ဘယ်ဆီကိုရောက်မှန်းမသိ … သိတာက တိုက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးတနေရာမှာ ….
ဘ၀ရဲ့ အမှောင်ထု မဟုတ်ပါဘူး ..
တခါမှ ပုံဖော်မကြည့်ခဲ့ဘူးပါဘူး …
“ကျမကိုကယ်ပါ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ရှိနေပါတယ်” ဆိုတဲ့
စက္ကူလိပ်ကလေး အခွင့်သာတိုင်း တိုက်ပေါ်ကနေ ပစ်ချခဲ့တယ် ….
တဦးတယောက်က အထူးတလည်ဖတ်မိပါ့မလား …?
တိုက်ပေါ်ကပစ်ချတဲ့ စာရွက်ကလေးတရွက်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ ရွေ့သွားနိုင်တာဘဲ …
အခွင့်သာတိုင်း စက္ကူလိပ်လေး ပစ်ချနေဆဲ ….
စာမူရှင်၏ စာအား မူလအဓိပ္ပါယ်များကို ထိခိုက်မှုမရှိစေပဲ .. ဆီလျှော်သလို ဖြတ်တောက်တည်းဖြတ်ပေးထားပါသည်။